Imodeli ye-cadastre ehlangeneyo: I-Webinar - Geofumadas
Imodeli yeCastastre ehlangeneyo: IWebinar
NgoJulayi, 2013 cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS
Kwiveki eledlule, i-webinar yenzelwe ukubonisa imodeli yeCadastre eMinicipal in municipalities.
Kulabo abayilahlekile, nantsi unokuyibona ekuchaseni, kwaye apha unako khuphela i pdf le ntetho.
Malunga newebhu cadastre
I-webinar igxininise indlela yokwenza indlela eyenzelwe kuphela le projekthi, ukuxhamla umsebenzi othakazelisayo obizwa ngokuba ngumbutho woomasipala.
Ngokusisiseko Commonwealth umbutho ngokuzithandela ezenza oomasipala ukuba ukwabelana izinto ezifanayo, njengoko kwintlambo onemveliso, a yomlambo, a imveliso amanzi ichibi, yipaseji nokhunye, njl Lo umbutho kukhokelela ngokuthenga izibophelelo zemali ukwenza iyunithi zobugcisa intermunicipal abanethemba ukulawula izibonelelo uthathe ithuba kuqoqosho abasakhasayo ukunikezela ngeenkonzo ukuba ngamnye uza kuba bangazinzi.
Malunga neprogram ye cadastre
E Honduras, apho ukususela ekupheleni koo, kodwa kuthatha ixesha elininzi namandla ngenkxaso sisebenzisana kunye nomthetho omtsha yoomasipala kunye iNkanyamba Mitch kubenza iimeko abafezekileyo yokuhambisa izibonelelo ngaphandle kokuba zixinge kunye necandelo koqeqesho (kurhulumente kazwelonke). Ngaloo ndlela, umthetho woomasipala ubatyhila njengeziganeko zobuntu; kunye nelungelo lomthetho. Oomasipala banikela ngenani lentlawulo yenyanga yintoni na ulawulo oluphambili lukarhulumente kubo; Kuyahluka ukusuka kwenye ukuya kwenye, kodwa ngokuqhelekileyo kukho phezulu eerandi 1,000 ngenyanga dolophu esizisa-mali sincinane umnxibelelanisi unit yobugcisa, injineli yoluntu ukuze nokubekwa kweliso iiprojekthi kunye nobugcisa ukuze koncedo lobuchwephetshe indawo yolawulo / yemali. Ngokuxhomekeke kulawulo lweeprojekthi kunye nenani loomasipala landa kwinani leenkonzo ezinikwe kwiinkonzo zentlalo, yoluntu kunye noluntu.
I-commonwealth ayikho into ebonakalayo kwinqanaba lezopolitiko, nangona libonakala kwilawulo lolawulo; kwizinga apho unokucela ukuba ipesenti ezenziwa ngabamasipala zincitshiswe ekudlulisweni kwezi zinto kwaye zinikezelwe kwiakhawunti yakho. Nokuba umngeni unamandla, ukulungelelanisa iimbopheleleko zabo kwaye ungawaguquli ube ngumasipala ophezulu okanye uMbutho ongekho uRhulumente; kunoko umzekelo wokuqinisa oomasipala nokubonelela ngeenkonzo eziphuculweyo phantsi koqoqosho lwezinga.
Kule meko, i-commonwealth yamaspala eMlambo wase-Higuito, ngasentshona, izindlu zakwa-13. Ufikile ukubonisa ukuba kuwo wonke ama dollar anikezela oomasipala, i-8 imbuyisela ekunikezeni iinkonzo kunye nokulawula iiprojekthi.
Okwangoku, ezininzi iinkqubo zentsebenziswano ziyavuma ukuba i-commonwealth iyona siqinisekiso esiqinisekileyo sokuzinyamekela kwinkqubo yophuhliso eHonduras.
Yiyo imeko xa iprojekthi yethu cadastre iqalile ngonyaka we-2007. Kwaye kwakhiwa isiphakamiso apho le ngqungquthela yaphulwa ukuba i-cadastre ingenziwa kuphela kunye nezibonelelo zangaphandle, kwaye ibiza imali eninzi ukuyiphumeza.
Ezinye iinkqubo zachazwa ngokuphuhliswa kwabaqhubi bee-pilot kunye nokwakhiwa komzekelo, phakathi kwazo:
Uzinzo olusekelwe kwi-commonwealth. Akukho masipala kuyo ngabanye ucinga ukuba Honduras ngaphezu kwe 94% oomasipala ukuba yahlanganisa, wavuswa yenziwe ngale ndlela, kangangokuba nawo waba ngummeli wowona ulungileyo uzinzo, appropriating iindima awareness, ukubeka esweni kunye ezilandelayo ukuqhubeka Kuba oku njengokumanyana cadastre zobugcisa joint ngaphandle japan ubalulekileyo enesiqingatha uphando cadastral ichaziwe. Izixhobo ezifana I-post-processing GPS
okanye isikhululo iyonke alinikwa koomasipala, kodwa nawo ukuze kusetyenziswe iindleko kuphucuke uziso lwenkonzo, kuquka ukuma kwindawo yoqeqesho sicinga ukuba oomasipala babechitha eninzi imali kwiinkonzo mphandle azanya ukubaleka iindleko kakhulu ephantsi
Ukungahambi kakuhle kwimiqondo emininzi. uluhlu lwezixhobo neenkqubo yakhiwa ukubonisa isicelo yomhlaba, ezomthetho, ukusetyenziswa komhlaba yezemali kunye neendlela zentlalo-qoqosho. Sothi mvukelo unako ukukhonza iinjongo ezininzi kodwa isicelo angaya ubungqina esithathwe kwiinkqubo ngokuthe ngcembe ngaphandle buthuntu kuphela ukuba umasipala kunye nemiba ezingeyomfuneko okanye ukunciphisa umasipala ukuxelela ngezibonelelo ezingcono technical, ezoqoqosho okanye iimeko nokungazinzi koqoqosho.
Ukudalwa kwesizukulwana esibuyiselwayo. IiTechnician wahlangana ezikhethiweyo kunye nolwazi loomasipala cadastre kwezemali, bonke zipeyintwe engwevu kwiimeko ezininzi kwafuneka ukuxhathisa kokukhutshwa nelobugcisa mapping digital, GIS kunye nokusetyenziswa kwezixhobo ezitsha; ngoko ke waqala ukudala izixhobo ezintsha kunye nabafundi abatsha abaphumelele kwi-baccalaureates kwikhompyuter nakwintlalo. Esi sizukulwana esitsha siya kuqeqeshwa ngemiba kamasipala kunye namava asebekhulile kodwa iya kulungelelanisa umcimbi wezobuchwepheshe ngokungatshintshi ukutshintsha.
Kwaye inkqubo yokwenziwa kweenkqubo kunye neenkqubo zaphuhliswa ukuqinisekisa ukuphathwa kolwazi oluye ngaphaya kweprojekthi.
Mandivume ukuba izinto ezininzi azizange njengoko sicinga, kodwa ngoku sibonisa iziphumo nemeko American Latin sixolile ukuba ziye imodeli ezintsha isebenza, kwaye ibonelele ngaphaya kwemida apho yenzelwe na.
Izibalo zeemviwo ze-cadastre edibeneyo
I-webinar iye yaphuhliswa kwi-platform ye-MundoGEO, kwaye kubakho abahleli be-300 abakhona; Nantsi isishwankathelo sabathathi-nxaxheba:
Uninzi ababekho ngabantu baseMzantsi Amerika (82%), baseYurophu a 7%, njengoko baseMerika kodwa ingakumbi Mexico kunye 4% kuMbindi Melika kunye zeCaribbean.
Ukuba sixabisa uhlobo lwabaqeqeshi, igrafu elilandelayo limele:
Icandelo lesithathu likarhulumente, enye ye-26% yamashishini abucala kunye ne-16% yecandelo likamasipala.
Kwaye ngoqeqesho, i-93% yayinguBunjineli, i-20% yeCrographic, i-17% yeCastastral kunye ne-10% UkuPhonononga. Kwakukho i-22% yezinye iindawo, ezifana noqoqosho, imvelo, icandelo lehlathi ... phakathi kwabanye.
Ngoku kukho imingeni ukwabelana umzekelo abanye abaxhasi ukuba benze umsebenzi ezinxulumene, kwakunye namanye amazwe ukuze ube nomdla ... imibuzo emininzi ukuphendula emva kubukhulu webinar.
Apha ungabona ezinye izixhobo zemveliso yenkqubo, kunye neevidiyo ezongezelelweyo zoqeqesho.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuthelekisa phakathi kwe-ArcGIS kunye ne-SuperGIS (okwangoku ngesiSpanish)
Post Next Bentley: izicelo Mobile kunye nabasebenzisi-kungekhona DGN-Okulandelayo "
Omnye Uphendule "Umzekelo we-cadastre ohlangeneyo: IWebinar"
UCarlos Eduardo Arizmendi Aguilar uthi:
Inomdla: Ndiyakuvuyiswa ngolu hlobo. Ndincoma ukongeza kwiphepha indlela yokusebenzisana nawe